Antoko PSD : “olon-kafa mahomby no hofidin’ny vahoaka eo” | NewsMada
Antoko PSD : “olon-kafa mahomby no hofidin’ny vahoaka eo”
Nitondra ny heviny manoloana ireny vina nambaran’ny filoham-pirenena ireny ny avy amin’ny antoko PSD. Taratry ny tsy fahombiazan’ny mpitondra ny nanaovany izany, araka ny hevitr’izy ireo.
“Rehefa tsy mahomby, aleo mitsotra ary alefa ny fifidianana. Olon-kafa izay mahomby no hofidin’ny vahoaka ho filoham-pirenena eo.” Io ny fanehoan-kevitry ny filohan’ny antoko Partiosocial democrate (PSD) Madagasikara, Bezaza Eliana, momba ny fampahafantaran’ny filoha Rajaonarimampianina ny vina Fisandratan’i Madagasikara 2030.
“Efa fampielezan-kevitra mialoha ny fotoana ny azy”, hoy izy. Taona 2030 no resahina. Tsara ny manao vina lavitra, fa amin’ny fampielezan-kevitra izay tsy mbola mahalany ny tena no mivoaka izany. Izay no handaniana ny tena. “Fa tsy hoe efa tsy nahomby efa-taona ianao, izay vao hamoaka vina amboaboarina”, hoy ihany izy.
Tsy fantatra ny tena mahamarina izany vina izany. Tsy ekeny ny fanaovana vina amin’izao fotoana izao, efa midika sahady fa tsy fahombiazana.
Fitaka ny vina 2030
Fitaka ny vina 2030, fa efa fahefa-taona ny fitondrana izao. Efa fifidianana no resahina izao, andrasan’ny rehetra rehefa misy kabarin’ny filoham-pirenena hoe: ahoana ny fifandimbiasan-toerana? Mampiakatra tanan’akanjo angaha no andrasana amin’ny filoham-pirenena?
Toy ny hoe mpampianatra manafina amin’izany ny tsy fahombiazana rehetra.
Ny resaka tena marina, ny anaty anatin’ny vilany sy lovia. Izay no tokony horesahina, fa tsy fitaka, sarimihetsika… Mody atao hoe fahefa-taona, amoromporonana tarehimarika hoe nahomby. Nefa tsy marina… Mihena, hono, ny fahantrana. Izy ihany no mahita an’izany.
“Mahita izahay fa vao mainka aza miampy ny fahantrana”, hoy ihany izy. Nihena ve ny isan’ny olona matory any anaty tonelina? Miakatra ny isan’ny kapoakam-bary ho an’ny Malagasy tsirairay? Miakatra ve ny fahefa-mividiny? Izany no fiainan’ny rehetra, nefa tsy misy resaka.
Une réponse à "Antoko PSD : “olon-kafa mahomby no hofidin’ny vahoaka eo”"
RANDRIAMIHAVANA 01/02/2018 à 12:33
Ny programme tena tsara ho anareo mieritreritra ny hitondra ny firenena dia ny anaovana lohalaharana ny ZON’OLOMBELONA